Zimbabwe, UK set for trade boost, diplomatic ties - FurtherAfrica
Zimbabwe, UK set for trade boost
in Africa, Cooperation, Diplomacy, Economy, Finance, Government, Trade, Zimbabwe
Britain is keen to increase trade with Zimbabwe now that it is free of the European Union (EU) and can make deals around the world outside the framework of the bloc.
Responding to questions on the implications of Brexit, and the final arrangements that came into force at the beginning of this year, and what it means to Zimbabwe, the British embassy in Harare said last year Zimbabwe ratified an Economic Partnership Agreement (EPA) with the UK.
“Following the end of the transition period, the EPA now allows Zimbabwean exporters to continue to enjoy tariff and quota-free access to the UK market, laying the foundation for a strong trade partnership in the future,” said UK Ambassador to Zimbabwe Ms Melanie Robinson.
Britain will continue to support Zimbabwean businesses and jobs for economic development.
“The total trade in goods and services — both exports and imports — between Britain and Zimbabwe in the four quarters to end of the second quarter of 2020 was US$412M.”
Last year, the British government announced a US$43,6M aid package towards Covid-19 medical supplies to assist in fighting the pandemic in Zimbabwe.
Also read: Zimbabwe blueprint sees economy expanding 5% a year through 2025
Speaking after the ratification of EPA, Foreign Affairs and International Trade Minister, Dr Sibusiso Moyo said the ratification of the deal was a big step in the country’s re-engagement efforts.
Ms Robinson welcomed Zimbabwe’s decision to ratify the EPA.
Turning to the level four lockdown measures, the embassy said it understood the requirement for the Zimbabwean Government to adhere to World Health Organisation guidelines on containing the spread of Covid-19.
The UK last week announced the allocation of an extra US$5,4M funding to feed some of those worst affected by the humanitarian challenges in Zimbabwe, which have been exacerbated by Covid-19.
This additional aid to Zimbabwe, she said, was part of a wider package of emergency aid for some of the most vulnerable countries in the Sahel, Syria, South Sudan, Nigeria, Somalia, Uganda, Venezuela and Mozambique.
Over the last 10 years, the UK has spent more than US$1B in aid in Zimbabwe.
The UK is one of the countries that have been assisting Zimbabwe in times of need, including when the Southern African country was hit by the tropical Cyclone Idai and the Covid-19 pandemic.
Tags: cooperationDiplomacyEuropean UnionTradeUKUnited KingdomzimbabweZimbabwe UK set for trade boostзимбабвеزيمبابويジンバブエ津巴布韦